Ingabe ama-Dawes ngamabhayisikili amahle? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kwamabhayisikili e-Dawes - izixazululo zepragmatic
Ukubuyekezwa kwamabhayisikili e-Dawes - izixazululo zepragmatic
Ingabe ama-Dawes ngamabhayisikili amahle?
Ngithenge i-Ama-DawesI-Galaxy cishe eminyakeni eyishumi edlule futhi ngiyithatha njengeyonakuhleinani. I-geometry inethezekile kakhulu ekugibeleni kwansuku zonke futhi yonke into ibonakala yenziwe kahle futhi ihlala isikhathi eside. Umsebenzi wokupenda muhle kakhulu. Sengimboze ngayo izinkulungwane zamamayela ngayo, iningi lalo emigwaqeni nasemigwaqweni yamahlathi futhi ngijabule kakhulu.
Bengihamba ngebhayisikili cishe amasonto amabili futhi bengifuna amabhayisikili amakhulu, angabizi kakhulu, ngoba neYoutuber yakho egudlile enobungani evela endaweni ayikwazi ukusebenzisa ikhadi lakhe lesikweletu ngokungafanele emabhayisikili acwebezelayo. Ngiyakhumbula ngenkathi ngiyi-rookie encane ngithenga u-gearbox wami wokuqala ongaguquki futhi kwangithatha amasonto amabili ngibhekabheka ukuphawula okungasizi ngalutho, okuklolodayo ezinkundleni zebhayisikili ngaphambi kokugcina ngixazulule ibhayisikili lelo kwakulungile.
Kepha asifuni nje ibhayisikili elihle, sifuna ibhayisikili elihle ngoba akufanele waneliswe nganoma yini, ngisho nakwibhayisikili lakho. Ngichithe cishe amahora angama-20 empilo yami ngizama ukuphendula umbuzo obekufanele uthathe imizuzu eyishumi; Ngimoshe isikhathi sami ngizama ukungadingi. Ungawabona kanjani amabhayisikili wamagiya angaguquki asezingeni eliphezulu: Nalu uhlu lokuhlola olulula ukulandela ukukusiza ukuthi unqume ukuthi ibhayisikili elisezingeni lokungena liyifanele yini imali yakho. (Umculo we-Jazz) Kumabhayisikili aqalayo asezitolo, imali itshalwa kahle kakhulu ebangeni lentengo lama-euro angama-400 kuye kwangama-500.
Lokho kuzwakala kuyimali eningi, ikakhulukazi uma ungaqiniseki ukuthi ufuna ukugibela ibhayisikili lakho nhlobo, kepha ukusebenzisa imali ethe xaxa lapha umqondo omuhle: amabhayisikili kubakaki lentengo ka- $ 400 kuya ku- $ 500 aphume khona manjalo ilungele ukusebenzisa futhi idinga ukuthuthuka okumbalwa kakhulu, uma kukhona. Leli banga lamanani lihlasela indawo emnandi yesilinganiso sekhwalithi yokuthenga. Uma usebenzisa imali encane, uzothola ibhayisikili elibi kakhulu futhi uma usebenzisa imali ethe xaxa, uzobona ukwehla kwembuyiselo.
Ibhayisikili elingu- $ 400 kuya ku- $ 500 linezinto eziqinile ezizomelana nokusetshenziswa kwansuku zonke, futhi lizokwenza kahle ngokwanele. Uma usaqala, 'okwanele ngokwanele' kusho 'okumangalisayo' kimi. Uma ungalithandi ibhayisikili lakho, abantu bayazi ukuthi amabhayisikili akuleli banga lamanani angamadili amahle kakhulu futhi bazothatha ithuba lokuthenga esesetshenzisiwe.
Sekukonke, la mabhayisikili angukutshalwa kwemali okuyingozi kakhulu futhi ungawathengisa kalula ukuze uthole imali yakho eningi, kepha ngenxa yokuthi la mabhayisikili athengwa kakhulu, uzowathanda futhi ungakhathazeki ngokuwathengisa kanjalo angasiza unquma ukuthi ibhayisikili elisezingeni lokungena liyifanele imali yakho: Into yokuqala esohlwini lokubheka ukuthi ngabe inkampani ilishicilele yini ithebula lejometri nohlu lwezinto zebhayisikili, njengoba le mibhalo emibili ibaluleke kakhulu ukubona ukuthi ibhayisikili kufanele imali yakho. Uma ibhayisikili olibukayo kungenzeka lilahlekile etafuleni le-geometry noma kuhlu lwezinto, noma okubi kakhulu, vele weqe zombili; ngeke ikufanele imali yakho Noma yiliphi igiya elilungisiwe elingena kahle lizocabanga phambili ngalokho okuthengayo, kuye engxenyeni yokugcina nemilimitha. Kodwa-ke, akuwona wonke amabhayisikili anohlu lwezinto kanye netafula le-geo okuyisinqumo esihle.
Ngakho-ke yilokhu okufanele ukubheke ngokuningiliziwe: Bheka insimbi ye-chromoly engu-4130 noma i-6061 aluminium butted. Kuleli qophelo okudingayo ukwazi ukuthi ukuthi 'ukubuthelwa kabili' kusho ukuthi ibhayisikili lizolula futhi lihambe kamnandi. Ngincoma ukuthenga ibhayisikili lensimbi kulolu hlu lwamanani njengoba kuvame ukucishe kufane noma kukhanye kakhulu kunomlingani wozimele we-aluminium, okusho ukuthi ungathola ukuqina okuphezulu nekhwalithi yokuhamba yensimbi ngaphandle kwezinhlawulo zesisindo ngokuvamile ezihlotshaniswa namabhayisikili ensimbi.
Insimbi kuleli banga lamanani iyisimo sokuwina kimi. I-Aluminium inekhwalithi eqinile futhi enzima yokuhamba engakhululekile ekusetshenzisweni komgwaqo. Iningi labantu abathola amafreyimu e-aluminium aqala ukubakhetha ngoba bacabanga ukuthi babukeka bepholile.
Uma uthanda ukubukeka kozimele be-aluminium ngokwanele ukuthi kuthinte ikhwalithi yokugibela, khona-ke ngazo zonke izindlela uma lokho kukusiza ukuthi ugibele ibhayisikili lakho ngaphezulu bese ulithola. Kepha ngebhayisikili lokuqala labantu abaningi ngincoma kakhulu ukuthi ngifune i-butted 4130 Chromoly futhi, kwesinye isikhathi ebizwa ngeReynolds 520 noma olunye uhlobo lweChromoly kodwa ziyafana, futhi funa i-aluminium ye-6061. Okulandelayo, kufanele unake isondo elinamasondo; namathela kumarimu angama-30mm ukujula noma ngaphansi.
Lokhu kugcina ibhayisikili lihlala isikhathi eside futhi kusanikeza ikhwalithi enhle yokuhamba. Gwema la malimu amahle agqamile, ajulile, anemibala amahle kubaqalayo abangazi lutho kangcono. Ngibakhwelisile futhi yebo bayamunca ngempela.
ukugibela ibhayisikili lokuvuna
Futhi qaphela ama-Novatec avaliwe noma ama-Formula hubs Lawa mahabhu akhululekile futhi ahamba cishe unomphela. Amabhangqa ami amafomula avalwe cishe aseneminyaka emihlanu ubudala futhi ajikeleza kahle njengosuku engathola ngalo, ngakho-ke, uluhlobo lwamadolo ezinyosi. Ungabona izizinda ezivaliwe zeFomula ngephethini yazo ye-trapezoidal egijima izungeze i-eksisi kanye namahabhu avaliwe we-Novatec ngohlobo lwenyembez lwawo oluzungeza i-eksisi.
Izinkampani eziningi ziphinde zifake uphawu kulezi zikhungo ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukukhomba lezi zikhungo ngokubukeka kwazo njengoba uhlu lwama-spec lungeke luthi ncamashi ama-'Novatec 'noma ama-'Formula' hubs, kodwa ngikholwe, zingamahabhu afanayo uma zibukeka zingagunyaziwe, umkhiqizo wenkampani uqobo noma ngophawu luka-Alex noma u-Weinmann. Ngokuvamile, amasondo angenamagama asindayo futhi ahlala isikhathi eside, imikhiqizo ephethwe yinkampani ingashaywa noma iphuthe, futhi amarimu omkhiqizo ka-Alex no-Weinmann azolunga ngokwanele futhi ngekhwalithi engaguquguquki kakhulu u-Alex no-Weinmann benza amasethi amasondo ahloniphekile wabaqalayo futhi umphakathi jikelele Ukuvumelana ngukuthi a bayaphila bayaphila.
Akuzona ezilula kunazo zonke, akuzona ezihle kunazo zonke, kepha zizokuthola kusuka endaweni yoku-A ukuya kukhomba B ngaphandle kokumangala. Ngemuva kozimele namasondo, kunezinye izici ezimbalwa zekhwalithi okufanele uzibheke. Ngokuvamile, amabhayisikili enziwe eTaiwan mahle kakhulu kunamabhayisikili enziwe eChina.
Amabhayisikili wokugcina nezakhi zenziwa eTaiwan. Ngakho-ke uma ungathola igiya elingaguquki lokungena elenziwe lapha, lihle. Uma uhlangabezana nemfoloko emgwaqweni, yithathe ukuze uqiniseke ukuthi yinhle.
Amabhayisikili wamagiya afika nemfoloko enezikhala kuwo. Amabhayisikili eza nemfoloko ye-unicrown angaba nokuthengwa okuhle, kepha imfoloko eboshiwe iyisibonakaliso sebhayisikili esezingeni. Uma uthenga ibhayisikili le-aluminium, qiniseka ukuthi liza nemfoloko yekhabhoni, ngoba futhi, imfoloko yekhabhoni ebhayisikili le-aluminium iwuphawu lwebhayisikili eliphakeme.
Futhi yenza ibhayisikili libe lula, okuyinto enhle futhi. Ezinye izimpawu zobungcweti nokunaka imininingwane kuzoba kuma-welds. Bheka ibhayisikili lensimbi ukubona ukuthi ama-welds ahambisana futhi ahlanzekile yini.
Uma ubheka ibhayisikili le-aluminium qiniseka ukuthi ama-welds acwebezelisiwe futhi abushelelezi njengoba ikhwalithi yama-welds imvamisa iwuphawu lokulandisa ekuphathweni kwekhwalithi yanoma iyiphi ibhayisikili, amabhuleki we-Tektro nama-levers angcono kakhulu ongawathola kuleli phuzu lentengo Bona 'Amabhuleki athengekayo anamandla amakhulu wokumisa, ukuzizwa okuhle, futhi awanaso isisindo esikhulu, empeleni ayisimo sokuwina-win-win. Futhi okokugcina, naka ukuqedwa kwezakhi ezinjenge-crank, isiqu, ibha yokubamba kanye nokuthunyelwe kwesihlalo. Ukushelela okubushelelezi, okungaguquguquki nokuhle ngokwengeziwe kwalezi zingxenye, kulapho zingagobhozela khona kakhulu kukhwalithi ephelele yebhayisikili.
Ungawabona kanjani amabhayisikili wamagiya angaguquki ezingeni lokungena. Okokuqala, yenza isiqiniseko sokuthi ifreyimu enamabhodi angama-4130 Chomoly noma ama-aluminium angama-6061 anama-double-butted, amasheke amabili avaliwe ama-Novatec noma ama-Formula hubs, kanye namathathu okuhlola umkhondo wobuciko. Uhlu olukhulu lokuhlola lwamagiya amisiwe ezingeni lokungena ungalulanda encazelweni.
kanjani ukukhweza ibhayisikili
Futhi uma ufuna usizo lwami ngokuthenga ibhayisikili. Cabanga ukuba ngumbhalisi omkhulu ngokungisekela kuPatreon. Futhi uma ufuna izincomo zami ezilula zebhayisikili lakho lokuqala elilungisiwe, shaya inkinobho yokubhalisa ngoba ngizokutshela kahle ukuthi yimaphi amabhayisikili amahle kakhulu esihlokweni esilandelayo.
Sengivele ngigibele ibhayisikili namuhla, kungani ungaziklomelisi ngokubuka enye indatshana, uma ungakakhweli ibhayisikili lakho, yeka ukungibona manje, vala ucingo lwakho, gibela ibhayisikili lakho nibe nesikhathi esihle esisodwa. Uma ubuka le ndatshana ngoba awunayo ibhayisikili okwamanje, hamba uyogijima noma okuthile noma unyuke intaba noma vele uphume, wenze okuthile.
Kodwa-ke, khumbula ukuhlala uyingozi.
Enziwa kuphi amabhayisikili e-Dawes?
Akuvamisile ukuthi ube nenhlanhla ngento ekhetheke kakhulu ukulenga nje eceleni komgwaqo, kepha ngazithela phezu kwaleli bhayisikili lapho ngiya emsebenzini ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngalolo phawu olwalulungele amanga wami wokuvuna. Masibhekane nakho, manje-ke yini ekhetheke ngayo? Okokuqala, yibhayisikili lokuvakasha ongaliboni kangako kulezi zinsuku, sinamashubhu akwaReynolds, amasondo kaMavic, iqoqo lamaqembu akwaSuntour futhi okuhamba phambili kukho konke, kumahhala. Namuhla sibheka ukuthi libuyiswa kanjani ibhayisikili ebelingavele liqonde kudoti.
Kumhlangano wokusebenzela! (umculo we-jazz) Okokuqala, ake sibheke ifreyimu nemfoloko, impela, zisesimweni esihle kakhulu, noma, eduze kakhulu ngebhayisikili elimahhala noma elinesaziso phambi kwendlu, ngicela uthathe . Manje kukho konke ukungathí sina, ngaphandle uma kuyibhayisikili elifana neColnago Master Olympic eyenziwe ngensimbi enkulu, uma-ke igobile noma isontekile noma iqhekeziwe noma ichotshoziwe ngeke ufune imali, isikhathi, noma umzamo wokuyibuyisela empeleni, ngaphandle kokuthi unangempela, angazi, uhlobo oluthile lokuheha kukho noma into efana naleyo. Manje-ke yini esizoyibheka? Yebo, qiniseka ukuthi izikopelo noma imithombo ihleleke kahle ukuze ingagqabuki noma ivele futhi uqiniseke ukuthi amashubhu wohlaka muhle futhi ayindilinga, noma ngabe yikuphi ukuma okufanele abe yikho, ukuze ingafakwa igabade noma isifaca, nokunye okunjalo.
Uma kunanoma isiphi isibonakaliso sokugqwala qiniseka ukuthi empeleni awudluli kusethi ye-tubing, ukugqwala okuncane komhlaba kulungile. ngoba singakususa lokho, kepha empeleni ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uhlaka lufinyelela emsebenzini wokubamba nokuthwala isisindo sakho ngenkathi ugibela. Uhlobo lwesilinganiso olulodwa oluyisisekelo ongalwenza ukuze uhlole ukuthi ifreyimu iqondaniswe kanjani lunezintambo ezimbalwa ukubona isondo lisuka esondweni.
Ngakho-ke ngaleyo ngcezu yentambo uma ufuna ukuyisonga uzungeze ishubhu lekhanda, ngokudlula ithubhu esihlalweni langempela lapha, iya ezinhlangothini zombili bese ingena kwabashiya phansi bese ufuna le ntambo iqine ngangokunokwenzeka. Angikwazi kahle ukubopha amafindo, kepha ngikulungele kahle izidingo zami, kodwa lokho kuzositshelani? Izositshela ukuthi ingemuva lebhayisikili lihambisana kanjani nengaphambili. Ngakho-ke kuthiwani uma unohlaka lwekhabhoni noma uhlaka lwekhabhoni? ifreyimu ye-aluminium futhi iphumile emugqeni lapho-ke mhlawumbe kungcono ukusuka kuyo manje ngoba lokho ngeke kuxhumeke kabusha ngokushibhile.
Kodwa-ke, ngohlaka lwensimbi kunezindlela ezahlukahlukene zokubuyisela uhlaka endaweni yalo, kepha manje senginokusetha kwesakhiwo, nginentshisekelo enkulu yokuthola ukuthi ingabe isemugqeni noma cha ngoba angikayihloli lapho futhi endaweni ngazitholela iteyipu elula yokulinganisa, ngizolinganisa ukuthi intambo ikude kangakanani nethubhu lesihlalo langempela ngapha nangapha, ingamasentimitha nohhafu, bheka nje ngakolunye uhlangothi, futhi iyintshi nohhafu, Nginenhlanhla. Vele, uma uhlaka luhle futhi luhle, sidinga ukubheka ezinye izingxenye ngoba ngaphandle kwazo ngeke wenze lutho ngokushesha noma kuphi, akunjalo? Ngakho-ke ake siqale ngamasondo ngoba ngokuvamile zingenye zezinto ezibiza kakhulu ukufaka esikhundleni sokudlidliza, ngakho-ke ezinye zazo akufanele futhi nazo zigijime kahle futhi ziqonde futhi ziqonde njengoba zishaya ezindongeni zamarimu ukuze ziqiniseke zinhle futhi ziyisicaba futhi azigqokiwe futhi ezingaba yingozi qiniseka ukuthi azikho kulezi zinsimbi ezigobile noma ezisontekile bese zigcina amathayi njengoba kusobala ukuthi lokhu kuyingxenye ebaluleke kakhulu yebhayisikili. Manje usukwazi ukubona ngokushesha uma isibambo sesibambo sigobile, ngoba kahle, asikho esimweni, masithembeke.
Manje mayelana nethebhu yesiphatho, empeleni ngincoma ukuthi ngiyisuse ngokuphelele, ukuze ubheke izibambo zokubona ukugqwala njengoba abanye abantu laphaya bejwayele ukujuluka kakhulu futhi kuyohlala kuma-handlebars nge-tape barbar futhi kudale imiphumela ebabazekayo kubandakanya ukuphula ama-handlebars akholelwa noma cha, ngakho-ke qiniseka ukuthi awukuqedi lokhu. Yibuke kahle bese uyayihlanza kahle ukuze ususe noma yiziphi izinsalela. Okulandelayo, ake sibheke izindawo ezimbili eziyinkinga kakhulu emabhayisikili wesitayela esidala njengalena nokuthi ngiqonde ubakaki ongezansi nehedsethi.
Okokuqala ngama-cranks zama nje ukuwahambisa ashone ngapha nangapha njengoba ubona lapha okungenani umsebenzi wokulungisa bese kuthi ngehedsethi ngaphambili ufuna ukuzama into efanayo bese uyinyakazisa phambili. Yebo, indlela elula yokuhlola ukuthi ihedsethi isemhlabathini nebhayisikili elingezansi ukufaka amabhuleki womabili. lena indlela yami p bese uzama ukuhambisa ibhayisikili emuva naphambili.
Uma kukhona ukunyakaza endaweni yamahedsethi lapha ongazizwa ngayo, ngikholwe, kuzodingeka ukuthi wenze i-tweaking encane ngokuhamba kwesikhathi. Ngokulandelayo hlola amabhuleki ukuze udonse izigaxa uqiniseke ukuthi abashayi bangempela noma ama-cantilevers enza umsebenzi wabo ngokufanele kuleli cala, okubonakala sengathi benza kahle kakhulu. I-Retro enhle nesikole esidala akunjalo? lawa ma-cantilevers, ngiyawathanda.
Futhi, hlola izintambo nganoma yiziphi izimpawu zanoma yikuphi ukukhwabanisa okusobala noma ukuqhekeka okufana nokuthi, akusona isiphelo somhlaba uma udinga ukuwafaka esikhundleni ngoba abiza kakhulu bese sizobheka izinhlelo zangempela zamagiya. Ngakho-ke, kimi, kuhle futhi kulula ngalokhu kushintshana kwamashubhu phansi. Ngiyabona ukuthi ama-mechs alungile, kuhle, kubonakala sengathi enza umsebenzi wawo futhi nangemuva, ake sibheke ukuthi amagiya e-ratchet asasebenza yini.
O, kufana nephupho. Izingxenye zekhwalithi - bayalalela, abagugi noma leso isisho esidala noma kunjalo. Uma izintambo zakho empeleni ziqhekekile noma zeluliwe noma okuthile okunjalo, kunendlela yokwenza ngesandla futhi lokho kungukubamba, lokhu kufanelekile ukuthi kube nentambo yangemuva enezintambo, uyibambe bese uyihambisa nje bese uyislayida bese uqinisekisa ukuthi intwasahlobo empeleni ibuyisela isiphambeko endaweni yaso efanele.
Ekugcineni, hlola ukuthi amaketanga awagqokile yini. Ngakho-ke uma unethuluzi lokuhlola uchungechunge sicela ulisebenzise. Ngenhlanhla lokhu kusenkomba yokugqoka ku-0.5, ngakho-ke kuhle impela ngamakhilomitha ayizinkulungwane ezimbalwa ngaphezulu, ngicabanga ukuthi ngemuva kombuso kuze kube manje, kubonakala sengathi bekune-innings enhle.
Kepha ake sifike engxenyeni yangempela yobumnandi, (umculo ojabulisayo) Kepha yini-ke edinga ukunakwa kwami ​​ngalesi sigaba esivela eminyakeni yama-80? Kahle ngamnika amasondo spin futhi ukuqagela ini? Niyaphila nonke. Kukhona i-kink encane kakhulu emgqeni, noma kunjalo, ngakho-ke ngizoyilungisa lapha nge-wrench ekhulunywayo ukuze ngiyenze iqonde, kepha ngenhlanhla lezi zindebe nezindebe zilungile futhi lokho kungukukhululeka kwangempela, ngoba kwesinye isikhathi lo msebenzi ungathatha isikhathi eside ukudlula imizuzu emihlanu, ngoba ukuthwala ngesigaxa kanye nesigaxa, mhlawumbe umgqomo wangempela wegobolondo langaphakathi lehabhu, nakho kungaphulwa ngesigaxa, kusenze singabi namsebenzi. Kepha nginenhlanhla ngaleli bhayisikili, angikholwa, kepha ngizovele ngilivule ngesiwrench esikhulumayo.
Manje indawo eyodwa edinga ukuthi iphenywe yileyontambo ye-derailleur. Kubheke, kubi, akunjalo. Ukhubazekile, kubi, kumane kumemeze wena, ngifuna ukunamathela ukuphela komunwe wakho ngamarandi ambalwa, ama-euro ambalwa, amakhilogremu ambalwa, vele ufake ezinye izintambo zangaphakathi ezingakunikeza ukuguquka okungcono noma ukubopha amabhuleki futhi ' Ngizophepha futhi, ngakho-ke yilokho kanye engizokwenza.
Manje, ngaphandle kwesitimela sangaphakathi esibolile noma ngokungagwegwesi lapho, zonke ezinye izitimela zisesimweni esihle impela engimangele impela, zizohlala izinyanga ezimbalwa ngaphezulu, kepha manje ngizokunikeza okuncane ithiphu ukuzama ukubhuleka ngokushelela futhi, ukuguqula amagiya futhi ukuphela kwesikhathi enginokweluleka ngaso ukusebenza ngebhayisikili sibheke phansi, noma impela hhayi endaweni emile. Isizathu ukuthi kufanele usebenze amaconsi ambalwa wesithambisi sakho njenge-z phansi kukhebula elingaphandle, amandla adonsela phansi azokwenzela lo msebenzi lapha, ngakho-ke ake uhlale imizuzu embalwa futhi kufanele uzizwe unyathela amabhuleki amnene, ngiyathanda ukubopha amabhuleki amnene nezinguquko zegiya cishe ngibusisiwe ukuthola leli bhayisikili futhi ikakhulukazi iqiniso lokuthi lehedsethi ayidingi ukunakwa. Lawa mahedisethi amadala esitayela esidala aziwa ukuthi aphakanyisiwe, avulekile, ayabheda, ajijile, noma yini enjalo, noma nakanjani awanakekelwa.
Uyamangala ukuthi kungani umnikazi wangaphambilini waleli bhayisikili alinikeze lona kuphela uma lisesimweni esihle kakhulu ukuthembeka. Manje uma uthole eyodwa yalezi futhi ingekho esimeni esihle, vele, qala uyihlukanise nesihlakala sehedisethi yakho bese ubona ingaphakathi lomjaho lapha, ngakho-ke uma ngithi hlola, qiniseka ukuthi azikho izimbobo kuzo , azilimazi, lezi yizinto ezivame kakhulu. Uma kunjalo, angizukuya enkingeni yokufaka amabheringi amasha noma igrisi entsha.
Esikhundleni salokho bengizothenga bese ngifaka ihedsethi entsha ngokuphelele ngoba awufuni ukubeka engcupheni ukuqondisa okungalindelekile noma okungabazekayo, angithi, ukuqondisa kwakho ibhayisikili lakho kubalulekile, akunjalo. Manje yisikhathi sebakaki ongezansi osabekayo, ngithi ngiyesaba ngoba leyo yinto engiyibonile ngokushesha nje lapho ngithatha ibhayisikili, bengizizwa nje ukuthi ama-cranks awaphelele futhi ngiyathanda ukuphelela ibhayisikili ngakho-ke Ngizosusa i-crank, ngizobe ngibheka kubakaki ongezansi futhi, ukuze ngibone ukuthi ayikho yini indlela yokuphinda isebenze futhi noma kungenjalo kuzofanele ngifake iyunithi entsha. Ake sibheke.
Manje yisikhathi sokubhekana naloo bakaki ophansi ngamathuluzi amadala esikole. yize ngikholwe ukuthi empeleni lezi zintsha sha futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungokokuqala ukuthi zisetshenziswe ku-GCN tech workshop njengoba singavamisile ukuba namabhayisikili amaningi eza nalolu hlobo lwesitezi ngakho-ke ake sithole leyo Grab yokuqala isiyingi sokuyikhipha ukuze singene kuzisekelo zebakaki eliphansi. Engizokwenza empeleni ukumane ngithathe umdlalo futhi ngizwe ukuthi ama-bearings anokhahlo noma abushelelezi.
Mhlawumbe kuvele kwenzeka ngoba njengoba ubona indandatho yokukhiya yayikhululekile, ngakho-ke kungenza ngicabange ukuthi mhlawumbe umnikazi wangaphambilini wayephakathi nomsebenzi wabo futhi wavele nje wanikela. Noma kunjalo, ake sibheke ukuthi kungaba nobudlabha kangakanani, nge-wrench wrench lapha, vula lokhu, uzama nje ukunxephezela okuncane kwalokhu kudangala. Iqinile lapho, kepha ubakaki ongezansi, akukho ukunyakaza futhi muhle futhi ubushelelezi.
Ngakho-ke sinenhlanhla, ngizovele ngifake isiyingi bese ngifaka i-crank, sesiqedile impela, kepha ungakhathazeki, kunezinto ezimbalwa engizokwenza ngazo. Manje ubungacabangi ukuthi ngingathola ukuthi leli bhayisikili lisebenze amakhilogremu nje ambalwa achithwe kulekhebuli, akunjalo? Cha, empeleni ngizofaka amathayi amasha kuleli bhayisikili njengoba nakanjani liphelelwe yisikhathi, awu, ngifuna isivikelo esihle sokubhoboza uma ngike ngalivakashela leli bhayisikili. Ngakho-ke ukutshalwa kwezimali okuncane kungaphezu kokukufanele.
Manje uzovumelana nami ukuthi ukufaka amathayi amasha kuleli bhayisikili kuzoqinisekisa ukuthi ukuphatha kwami ​​kuzoba ngcono kancane ekuvikelweni emaphunjini, futhi kuphephe kakhulu lapho uvalile, ingasaphathwa eyamasondo engisanda kuwasusa, ngokuthembeka, ayethusa lapho ngibasusa onqenqemeni lwawo, aqhephuka nephunga alishiyanga kakhulu emcabangweni. Manje kunento eyodwa yokugcina engizoyenza, okuwukusonga izibambo, kepha ngizokutholela ukuthi ungakwenzi konke lokho ngoba ngikhetheke kakhulu uma kukhulunywa ngakho, kunendatshana yalokho. Manje iseluleko esincane, uma uhamba futhi ubona uphawu olufana nalolu, ungaqhubeki phambili.
Bamba kancane, thatha ibhayisikili ngoba lingaba yigugu eliphelele njengoba ngilithole lapha nginokumangala ngalokho, ukuthembeka ngokuphelele. Manje khumbula futhi ukungazisa ukuthi uzohlola ini ngebhayisikili uma ulithole eceleni komgwaqo, ungazise esigabeni sokuphawula ngezansi futhi njengenjwayelo, nikeza lo mbhalo isithupha esikhulu bese wabelana ngaso nabangani bakho , ikakhulukazi uma omunye wabangane bakho ecishe athola ama-dumpsters. Ungakhohlwa ukuvakashela isitolo se-GCN ku- shop.globalcyclingnetwork.com bese ubuka ezinye izindatshana ezimbili ezinhle manje.
Hamba uyomnika iwashi.
Ngabe amabhayisikili e-Dawes hybrid kukhona okuhle?
Ama-DawesImijikelezo ingumkhiqizi wamabhayisikili ozinze eCastle Bromwich, eNgilandi.Ama-Dawesikhiqiza uhla lweamabhayisikilikufaka phakathi umgwaqo, intabaamabhayisikilinama-tandem, kepha yaziwa kakhulu ngokuvakashaamabhayisikili, ikakhulukazi imigqa yemodeli ye-Galaxy ne-Super Galaxy.
Ngabe iDawes Galaxy isenziwe?
Kungukuhamba okunethezekile okunengqondo. Uhlaka lwe-6061 alloy (ikakhulukazi i-aluminium) luhlinzeka nge-kuhleukuhamba okuyisisekelo kwenduduzo nokuvakasha. Inamandla futhi iqinile. Abantu abathenga i-Ama-Dawesukutholakala, ngeke kuyisebenzisela ukugijima kepha ukugibela kwezokungcebeleka, ngakho-ke ukuhlanganiswa kwenduduzo nokuqina kubalulekile.
Ungakwazi ukuvakashela ibhayisikili elihlanganisiwe?
AmaHybrids angakwaziisetshenziselwe ukukhanya ukuya kokulinganisela ukugibela ngaphandle komgwaqo,ukuvakasha, ukuhamba, nokusetshenziswa kokuzijabulisa. Ngoba i-i-hybridayikhanyi njengomgwaqoibhayisikili,thinamusa ukuncoma ukusebenzisaeyodwangokujaha, noma kunjalo, bonacanisetshenziselwe ukuqeqeshwauma uUdinga ukubeka isivinini sakho esivivinyweni.
Ingabe amabhayisikili emithala alungile?
Ngokwami ​​ngiyazisa iTrinX kakhulu kunamanye amabili ngenxa yokuphakama kwayoikhwalithinesitayela. Amandla weTrinXamabhayisikiliyiyona kanyekuhleInani eliqhathaniswa ne-ikhwalithiwebhayisikili. Idizayini yeTrinX nayo iyashintsha njalo, minyaka yonke inkampani ikhipha amamodeli amasha amahle futhi ithuthukeikhwalithi.
Ungakwazi ukugibela amamayela ayi-100 ngebhayisikili elihlanganisiwe?
Umgibeli webhayisikili onempilo efanelekilecanukumboza kalulaIzinkulungwane eziyi-100ngokunethezeka kuibhayisikili elihlanganisiwe. Emabangeni amafushane kakhulu kungcono ngisho nokuphatha okunethezekilei-hybrid.10.09.2020
Ingabe iTrinX ingumkhiqizo webhayisikili omuhle?
I-Trinxkuyintoumkhiqizi omuhle, noma ngabe akuyona eyaziwayoibhayisikilientshonalanga.I-Trinxamabhayisikili emigwaqo mahlekuhlefuthi, kusuka kwisabelomali saboibhayisikili le-trinxuchungechunge lwesikhathi.
Ngabe ukuhamba ngebhayisikili amamayela ayi-100 Kunzima?
Ukuqeqeshwa ukugibela aibhayisikili amamayela ayi-100Kunzima kangako, futhi kuncike ekuthembekeni komzimba, kunokugijima ibanga elide. Uma kushiwo lokho, kuseseyiqiniso impelakanzimainto okufanele uyenze, futhi kufanele usebenzele kukho. Ukuhamba okude kakhulu engikuthathe ngaphambi kokugibela ikhulu kwakungu-80Izinkulungwane.
Ingabe amabhayisikili e-hybrid alungele ibanga elide?
Yebo,emabhayisikili hybridingahamba ngempelaamabanga amade. Ukuba ngu-kuhleukuxuba kwentaba nomgwaqoibhayisikili; kuyintokuhleinketho yokugibela ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene (ukuxubana kwe-On-road, ukuhamba ngomgwaqo). Ohlangothini olungezansi, lunamathayi abanzi kunomgwaqo ojwayelekileibhayisikilifuthi ngalokho kudinga umzamo othe xaxa.
Yikuphi ibhayisikili elihle kakhulu ongalithenga kwaDawes?
Ukubuyekezwa kukaDawes Karakum UDawes unolayini olwandayo lwamabhayisikili, kepha mhlawumbe aziwa kakhulu emhlabeni wokuvakasha ngenxa yedumela elihle lama-Classics afana ne-Galaxy. Isilinganiso sethu esingu-4.5 kwezingu-5 zezilinganiso zezinkanyezi4.5 GBP £ 549.99 RRP Yeqa ukubuka amadili
Ngubani umnikazi weDawes Cycle Company?
UDawes (ophethwe yiTandem Group) wake waba yinkampani enkulu yaseBrithani..nginamabhayisikili emithala weDawes abuyela emuva cishe eminyakeni engama-50. Manje kubonakala kimi ukubheka ukuthi amakhasimende ayiziphukuphuku okufanele azikhohlise futhi ukuphepha kwawo kunganakwa. Njengoba kushiwo ekubuyekezweni kwangaphambilini kufanele uqale uqaphele ukuthi amabhayisikili amaningi eDawes manje enziwa eBangladesh.
izinongo ezilungele ukuvuvukala
Ibiza malini ibhayisikili lokuvakasha le-Dawes Galaxy?
Uma uyithola ngeposi, noma kunjalo, kuzodingeka ukuthi ulingane nama-pedals bese uphendulela ama-handlebars uqonde futhi ulungise ukuma kwawo. Abiza malini amabhayisikili e-Galaxy Touring? IDawes Galaxy - £ 1,199 GBP ($ 1,910 USD, € 1,402 EUR) IDawes Super Galaxy - £ 1,399 GBP ($ 2,230 USD, € 1,637 EUR) IDawes Ultra Galaxy - £ 1,699 GBP ($ 2,707 USD, € 1,988 EUR)